कतारमै रहेका नेपालीहरुको लागि खुसीको खबर ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/कतारमै रहेका नेपालीहरुको लागि खुसीको खबर !
तपाई प्रहरीमा भर्ती हुन चाहीरहनुभएको छ र अवसर पाइरहनुभउको छैन भने तपाईका लागि खुशकिो खबर छ । त्यो पनि कतार प्रहरीमा । अब निजी क्षेत्रमार्फत अब वैधानिक रूपमै नेपालीहरू कतार प्रहरीमा भर्ना हुन जान पाइने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेसँगै कतार प्रहरीमा भर्ना हुन पाइने भएको हो ।
विभागले चैतमा सूचना नै प्रकाशित गरेर कतार प्रहरीमा भर्ना गरिदिने बहानामा ठगी हुनसक्ने भन्दै सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरेको थियो।
अस्पतालको आईसीयूमै कोरोना संक्रमितको मृत्यु
राहत माग्न गएपछी वडाध्यक्षले खु’कुरीले हा’ने